भुलेर पनि यी ३ बार कपाल र नङ नकाट्नुस् – Krazy NepaL
March 2, 2021 1234
आफ्नो धर्म ,परम्परा तथा सस्कृति अनुसार फरका फरक किसिमको रुढीबादी मान्यताहरु रहेका छन् । कसैले के गर्नु र के नहुने , कुन दिन के गर्न र कुन दिन के नहुने भन्ने जस्ता मान्यता रहेका छन् ।
त्यसैसगँ सम्बधित हामी हप्ताको ७ बार मध्ये कुन बार के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन् भनने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौ । यसै अनुसार तपाइको घरमा अग्रजहरुले मंगलबार, बिहिबार अनि शनिबार कपाल काट्नु हुन्न भनेको त सुन्ने गरेकै छौं होला ।
तपाईलाई यो बारेमा ख्याल नै गर्नुभएको थिएन् होला । त्यसैले आज हामी यसको रहस्य खोल्न गइरहेका छौ । हिन्दु धर्म ग्रन्थका अनुसार हप्ताको ३ बार नङ र कपाल काट्न नहुने कुरा बताइएको छ ।
यस्ताे छ कारण,
सुरुवातमा मगंलबार– धर्म ग्रन्थका अनुसार यदि तपाई मंगलबार नङ काट्नु हुन्छ भने तपाईको परिवारमा मन मुटाब बढ्न सक्छ भने तपाईको शरीरमा रक्त नाली सम्बन्धि समस्या बढेर जान्छ । साथै यस बार कपाल काट्नु भएमा तपाईको धन हानी समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।
तपाईको कुण्डलीमा मंगल ग्रह कम्जोर रहेको छ भने तपाईले यस दिन निषेधित कार्य गर्नु भएमा मंग ल ग्रहको कृपा कम हुने साथै अशुभ फल मिल्न शुरु रहने विश्वास रही आएको छ ।
दोस्रो विहीबार– यो बार यदि तपाई नङ काट्नु हुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा सफलता मिल्न गार्हो हुने ज्योतिस शास्त्र बताउने गर्छ । तपाईलाई नङ काट्नाले यस दिन पेट सम्बन्धि समस्या समेत बढेर जाने विश्वास गरिन्छ ।
यस दिन कपाल काट्न समेत अशुभ मानिन्छ । यस दिन तपाईमा गलत उर्जा पैदा हुने हुँदा तपाईको दाम्पत्यजीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
तेस्रो शनिबार– यो दिन यदि तपाई नङ काट्ने गर्नु हुन्छ भने तपाईको आयु घटेर जान्छ भन्ने विश्वास रही आएको छ । साथै यसो गर्दा तपाईको धर्म दरिद्रता समेत बढेर जान सक्छ ।
शनिबार तपाईले कपाल काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईमा गलत विचार हावी रहन सक्ने कुराको ज्योतिष शास्त्र बताउने गर्छ । साथै यस दिन कपाल काट्नाले तपाईमा हड्डी सम्बन्धि समस्या बढेर जाने हुन्छ । त्यसैले यसबार बाहेक अन्यबार मात्र कपाल तथा नङ काट्दा राम्राे हुने छ ।
Prevआज १८ फागुन ,मंगलवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस्
Nextभाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? थाहा पाउनुहोस्
२०२१ मा चम्किरहेका कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिको भाग्य, अन्यको कस्तो ? (भिडियो)